I-15 YEEPOMADE EZIBALASELEYO ZAMADODA ZOKUSEBENZISA KULO NALUPHI NA UHLOBO LWEENWELE (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-15 yePomades efanelekileyo yamadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-15 yePomades efanelekileyo yamadoda
Ukuba ufuna isitayile sezona zilungileyo iinwele zamadoda, uya kufuna ukusebenzisa eyona pomade intle kwintengiso. Nokuba uneenwele ezingqindilili, ezibhityileyo, ezi-wavy, okanye iinwele ezigobileyo,…
Ukuba ufuna isitayile sezona zilungileyo iinwele zamadoda, uya kufuna ukusebenzisa eyona pomade intle kwintengiso. Nokuba uneenwele ezingqindilili, ezibhityileyo, ezi-wavy, okanye ezinenwele, ipomade ephezulu yamadoda inokufumana indibaniselwano efanelekileyo yokubamba kunye nokuqaqamba xa usenza iinwele zamadoda. Ngapha koko, i-pomade elungileyo inokukunceda ukufezekisa inani leenwele ezakudala kunye nezala maxesha, nokuba uthini uhlobo lweenwele zakho.
Apha ngezantsi, siza kuvavanya ezona pomade zibalaseleyo zamadoda ukuze afumane, ngokuqala Suavecito Firm Bamba kwaye UBaxter waseCalifornia Clay Pomade . Ukusuka ekubambeni okuqinileyo kunye nokuqaqamba okuphezulu ukuya kubamba oluphakathi kunye nokugqitywa kwe-matte, ezi oyile kunye neepomades zamanzi zivela kwimveliso ephezulu ejikeleze. Jonga ezi pomades zilungileyo zeenwele ukuze ufumane iimveliso zesitayile esifanelekileyo kwiimfuno zakho.
1I-15 yePomades efanelekileyo yamadoda 2021
1.2UBaxter waseCalifornia Clay Pomade
1.4Ipopercut Deluxe Pomade
1.5I-Redken Cream Pomade
1.6I-Reuzel yendalo yefayibha yePomade
1.7Ukutyibilika kweViking Pomade
1.8I-American Crew iPomade
1.10I-Imperial Barber Classic iPomade
1.11IViking Revolution iPomade
1.12Iinwele Craft Co Clay Pomade
1.13I-Rocky Mountain Barber iPomade
1.14IiChronos kunye neCreed Organic Hair Pomade
MbiniIoyile vs iPomades esekwe emanzini
2.1IPomades esekwe kwioyile
2.2Amanzi asekwe ePomades
3Eyona Pomade ilunge kakhulu, eQinisekisiweyo, eQinisekileyo, eNwele okanye eNwele?
I-15 yePomades efanelekileyo yamadoda 2021
Suavecito inikeza ubambelelo olomeleleyo kunye nokuqaqamba okuphakathi ngaphandle kokugqitywa kobunzima, kushiya iinwele zamadoda zisebenza, zithambile kwaye ziyakhazimla. Ilungele isitayile se-retro kunye neenwele zale mihla, le pomade iphezulu yamanzi iyahambelana nazo zonke iintlobo zeenwele, kubandakanya nezinwele ezomeleleyo, ezibhityileyo, ezigobileyo kunye neenwele ezintle.
Ngevumba elimnandi elithandekayo elifana necologne, amadoda nabafazi bathanda ivumba elikhulu. Ukungaguquguquki okune-creamy ye-pomade kwenza kube lula kwisitayile ngeenwele kunye nokongeza ubume. Xa isetyenziswa kusasa, iya kugcina iinwele zakho zikwindawo yonke imini yonke.
Ukuguquguquka ekukhanyeni kunye nokubamba, sebenzisa le pomade kwiinwele ezomileyo ngokuqaqamba okuphantsi kunye nokubamba okunamandla, okanye ukuthambisa iinwele ngokuqaqamba okungaphezulu kunye nokubamba okuphakathi. Eyilwe ngaphandle kweekhemikhali ezinobungozi, iSuavecito ayinakoma, iqine, okanye ifake kuwe. Kwaye ngenxa yokuba inyibilikiswa ngamanzi, imveliso iyahlamba ngaphandle kokusebenza kwaye ayishiyi ngasemva nayiphi na into eyakha umpu, intsalela okanye uvakalelo olunamafutha.
Njengolunye lweempawu ezinconyelwa kakhulu kushishino lwe-pomade, iSuavecito iphuhlise igama lokuhambisa imveliso esemgangathweni yamadoda. Ngamawaka ophononongo olugqwesileyo kunye nokuhlelwa, awungekhe uhambe gwenxa ngale nto Pomade enexabiso eliphezulu ngexabiso elifikelelekayo.
Njengenqaku elisecaleni, abafana abakhetha ukubamba okuphakathi kunye nokuqaqamba kufuneka bazame ISuavecito's Original Hold Pomade . Ukuba ufuna i-matte pomade elungileyo, uphawu lwentengiso Matte iPomade imveliso inokuba lolona khetho lufanelekileyo. Inkampani ikwabonelela nge pomade esekwe kwioyile ukukufumana ujonge igrisi efunekayo kwipompadour yakho, ukubuyela umva, okanye icala elisecaleni.
8.866 Izinto ezithethwe ngabantu ISuavecito Pomade Firme (eyomeleleyo) Bamba i-4 oz
UkuBamba okuQinisekileyo. Le yipomade enkulu yeenwele ...
Amanzi anyibilikayo. Le pomade ihlamba ngokulula nge ...
Ukudibanisa ngokulula. Uhlobo lweenwele zakho ngaphandle ...
$ 13.66 Jonga iAmazon
UBaxter waseCalifornia Clay Pomade
Ukuba ujonga ipomade yendalo, UBaxter waseCalifornia Idale umgangatho wodongwe ophucukileyo kunye nobuchule obuhle besitayile. Ukudibanisa i-beeswax kunye nodongwe lwe-kaolin, le pomade ibonelela ngokubamba okuqinileyo okuguqukayo kunye nokugqitywa kwe-matte.
Ngapha koko, i-beeswax kunye nodongwe zisebenza ukuhambisa isiphumo sokuqina, zisenza ukuba kube luncedo kumadoda aneenwele ezintle okanye ezicekethekileyo.
Zigqibelele izitayile ezipholileyo, ezinjenge-quiff, ikama ngaphezulu, i-faux hawk eyonakeleyo, kunye nesityalo esenziwe ngombala, le mveliso inyakamisa iinwele kunye ne-scalp ukushiya iinwele zakho ziziva zithambile kwaye zikhangeleka zendalo.
Ngefomula etyebileyo kunye nokhilimu, le pomade ihamba kakuhle ngeenwele ukwenza umsebenzi wenziwe ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Uya kufumana ukubamba okuphezulu okuyimfuneko kwiinwele ezicocekileyo nezime kakuhle, kodwa ukonwabele izibonelelo zokuguquguquka, ivolumu kunye nokuhamba.
Amanzi anyibilikayo ngamanzi, ahlambe ngokulula ngaphandle kokushiya intsalela ngasemva. Nangona ingabizi kakhulu, le mveliso yenye yezona ndlela zithandwayo zokuzonwabisa zabafana.
Ukuba ujonga iinwele ezinombhalo ngenkangeleko yendalo kunye nokuziva, emva koko UBaxter waseCalifornia Clay Pomade kufanele ibe kukukhetha kwakho. I-brand ikwenza ukukhanya okukhulu, ukugqiba okuthambileyo Ikhefu yePomade Kunye ne Ipomade yamanzi enzima ukubamba ngokuqinileyo kunye nokukhanya okuphezulu.
3,572 Izinto ezithethwe ngabantu IBaxter yaseCarlifonia Clay Pomade, iMatte igqityiwe / iStrong Hold, iinwele zenziwe ngamadoda, 2 fl. Oz
Ukwahlula, ukucacisa nokubumba iinwele zakho
Inika ukugqitywa kwematte
Ukubonelela ngokubamba okuqinileyo, okuhlala ixesha elide kumadoda ...
$ 23.00 Jonga iAmazon
Ukunikezela ngokuqina okuqinileyo kunye nokukhanya okuphakathi, Layrite Superhold iPomade lukhetho oluphezulu kuye nabani na ofuna amandla aphezulu kunye nolawulo ngokukhanya okuphakathi. Ilungile kwiinwele ezimfutshane neziphakathi ubude, le pomade isebenza kakuhle kwiintlobo zeenwele ezintle, ezigobileyo, ezithe nkqo nezingqindilili.
Ikwasebenza kakuhle ekubhaleni ikama ngaphezulu kokuphela, utyhoboze umva ngaphantsi kwe-undercut, i-faux hawk, mohawk, icala elisecaleni, ukusika kweqela, kunye nepompadour.
Eyilelwe ukubamba njengejeli kunye nesimbo sokuguquguquka kwe-wax, le pomade inyibilikayo emanzini ibonelela ngolawulo oluhlala ixesha elide ngaphezulu kwezona zinzima kakhulu ukulawula iinwele ezirhabaxa, iinkomo, kunye ne curls. Ngaphezulu, ishiya igumbi lokuphefumla kweenwele zakho kwaye ayitshisi, ayomi, okanye iqhekeke.
Yenziwe ngevumba elimnandi kodwa elincinci le-vanilla, le yimveliso enuka kamnandi.
Ukuba ufuna ukuhamba ngakumbi kunye nokuhamba, sicebisa ukuba uqale nge Ukubeka iPomade yoqobo . Ngaphandle koko, i Ukulawula Ifomula iya kukunceda uzitayile zonke iinwele ezipholileyo.
Izimvo eziyi-3,841 I-Layrite Superhold iPomade, i-4.25 oz
Ulawulo olongezelelweyo lokulawula okunzima
Ukubamba iinwele ukuba zenze nokuba zezona ziphezulu ...
Isasaza ngokulula-nokuba kungqindilili, kurhabaxa okanye ...
$ 18.00 Jonga iAmazon
Ipopercut Deluxe Pomade
Ipopercut Deluxe Pomade inikeza ukubamba okuqinileyo kunye nokukhanya okuphakathi ukuya phezulu. Le pomade inyibilikayo yamanzi ihamba ngokugudileyo kwaye ayizomisa iinwele zakho, zikhokelela kwisiphelo esihle esicocekileyo.
Ilungele iinwele ezimfutshane neziphakathi kunye nazo zonke iintlobo zeenwele, abafana baya kuluxabisa ulawulo, inkcazo kunye nokuzinza kwale mveliso yokuthayipha. Kulula ukuyisebenzisa kwaye uyisebenzise, ​​iya kushiya iinwele zakho ziziva zithambile ukubamba.
Ukusuka kwi-pompadour ukuya kwicala elisecaleni, ukubuyela umva, okanye ukubukeka okungcolileyo, uya kufumana isitayile esimnandi ngaphandle kwe-greasy okanye i-pomade enzima enobunzima beenwele zakho. Nangona inamandla okugcina iinwele zakho zibhalwe usuku lonke, ifomula esekwe emanzini ihlamba kwangoko kwishawari.
Kuza nephunga elimnandi, ukudibanisa ikhokhonathi kunye ne-vanilla ngevumba elikhanyayo.
Yenziwe e-Australia, inkampani isebenzisa kuphela izithako zepremiyamu, oko kuthetha ukuba i-pomade ayinazichiza kwaye ayizukubangela naliphi na ibala okanye ulusu olucaphukisayo entlonzeni yakho.
Njengenye ipomade eyaziwayo yamadoda, Uppercut Deluxe uphawu lokuzilungisa kwamadoda kufanelekile ukuba luqwalaselwe.
Ukubamba okuphakathi kunye nokugqitywa kwe-matte kwiinwele ezenziwe ngombala kunye nezimdaka, I-Uppercut's Matte Pomade imveliso kufuneka isebenze kakuhle.
Intengiso Izimvo eziyi-2,816 Ipopercut Deluxe Hair Pomade, ii-3.5 ii-ounces
Olu bamba luqinileyo, ukukhanya okuphezulu pomade yayiyeyokuqala ...
I-Deluxe Pomade yenzelwe ukuqonda ...
Zilungele zonke iintlobo zeenwele zobude obuphakathi, ...
I-Redken Cream Pomade
I-Redken Cream Pomade ibonelela ngokubamba okuphakathi kunye nokugqitywa kokukhanya okuthe tyaba. Njengemveliso yeenwele ezivuselelayo, le fomyula isekwe emanzini yenziwa ukuba ikunike inkcazo, ubume, kunye nembonakalo ethambileyo.
Njengeyona pomade ilungileyo yeenwele ezinde, ilungele ukuguquguquka, iinwele ezihambayo ezifuna ukubamba ukukhanya kunye nokubamba kwendalo.
Nangona kunjalo, abafana bangayisebenzisa le mveliso kuzo zonke iintlobo zeenwele kunye nobude. Eyilelwe ukwenza iinwele ukuba zenze umyalezo kunye nokwenza isitayile ngaphandle kokongeza ukuqina, le pomade ayishiyi ngasemva nakuphi na ukwakha okanye intsalela.
iinwele ezinde zamadoda
Amanzi anyibilikayo ngamanzi ahlambe ngokulula, le pomade yokhrimu nayo inevumba elicekeceke, lobudoda elinuka litsha kodwa elingayi kuphithizela.
I-Redken Brews Cream Pomade yinto entle yokwenza isitayile samadoda oya kuziva ukhululekile ukunxiba naphi na.
Ukuba iinwele zakho zinamafutha, zilungile okanye zincinci, khetha Udongwe lwePomade eRedken ngokugqitywa kwamatte. Ngokufana noBaxter waseCalifornia kodwa ngexabiso eliphantsi, uyakufumana ukubukeka okumnandi okuya kwenza ukubonakala kweenwele ezijiyileyo, ezigcweleyo.
Izimvo eziyi-1,449 I-Redken Brews Cream Pomade yaMadoda, Ukubamba okuPhakathi, ukuGqibela kweNdalo kwe3.4 Ounce
Le wax inika uluhlu lokukhetha isitayile
Iimveliso zolawulo oluphakathi, eziphakathi kunye nolona luphezulu
$ 18.50 Jonga iAmazon
I-Reuzel yendalo yefayibha yePomade
I-Reuzel yendalo yefayibha yePomade inikezela ukubamba okuphezulu kwaye akukho kukhanya ukunika iinwele zakho impilo esempilweni, kunye nokugqitywa kwendalo. Inikezela ubhetyebhetye kunye nolawulo ngenkcazo, le pomade ifezekile ekufezekiseni izitayile ezimdaka, kubandakanya iinwele ezixutywe ngasemva, imiphetho emide, ikama ngaphezulu kokuphela, iipeyinti ezinombala, iziqu zala maxesha, kunye nezinye iinwele ezipholileyo.
Nokuba uneenwele ezimfutshane ukuya kweziphakathi kwaye zingqindilili, zibhityile okanye zineenwele ezi-wavy, abafana baya kuyithanda indlela oziva ngayo lo mveliso wokuthambisa kwizinwele zabo.
Ngamanqaku atyhafileyo e-mint kunye ne-vanilla, le mveliso inuka kamnandi ivumba kamnandi ngaphandle kokongamela i-cologne yakho. Zenziwe nge-aloe vera, iquinoa kunye neoyile ye-castor, ezi zithako zendalo zinceda ukukhuthaza ukuqina kweenwele kunye nemeko; Okwangoku i-lanolin wax kunye ne-bex yenze iinwele zibukeke.
Amanzi ancibilikayo ngamanzi, le fayibha yenziwe kakuhle ayina-grease kwaye ihlamba ngokulula. Imveliso yeenwele entsha ebonakalayo ngaphandle, sebenzisa IPomade yeNdalo kaReuzel iziphumo ezingayi kudanisa.
Ukubamba okuphezulu, ukukhanya okuphezulu pomade, zama Reuzel Luhlaza . Ngevumba elimnandi elimnandi, le pomade isasazeka njengebhotolo ukongeza ukugqibezela kuso nasiphi na isitayile, ngakumbi icala elisecaleni, ukubuyela umva okanye ipompadour.
Izimvo eziyi-2,638 I-REUZEL Fiber Pomade, i-4 oz.
zilawula nezona zigqibeleleyo, ezingqindilili, ezingalawulekiyo ...
igcina iinwele endaweni
Ukutyibilika kweViking Pomade
Ukutyibilika kweViking Pomade yenye imveliso yokulinganisa amanzi esekwe kakhulu emadodeni. Ngokubamba okuphakathi kunye nokuqaqamba okuphezulu, inika zonke iintlobo zeenwele kunye neentlobo zolawulo oluyimfuneko kunye nokugqitywa okucekeceke kujongeka kakhulu.
Ngenxa yokuba kulula ukusebenza kunye kwaye uziva ukhaphukhaphu, amadoda aneenwele ezomileyo, ezingqindilili nezinamavili angazisebenzisa ukukhulisa ivolumu ngelixa elahla i-frizz. Le pomade inokuguqula iinwele ezimdaka, ezomileyo okanye ezonakalisiweyo kwaye ukubamba kwayo kakuhle kunokulawula ukugcina naziphi na iinwele zamadoda endaweni.
Nangona kunjalo, abafana banokuhlengahlengisa i-gloss kwiinwele zabo ngokuyifaka kufumile okanye kwiinwele ezomileyo. Ukuyisebenzisa kwizinwele ezifumileyo kuya kuzisa ukubukeka okumanzi okukhazimlayo, ngelixa iinwele ezomileyo ziya kuthi zifunxe ngakumbi kwaye zifezekise ngakumbi, isitayile sendalo. Nokuba yeyiphi, iyaqhubeka ithambile kwaye igudile.
Abafana bayalithanda ivumba elingaqondakaliyo, elikhumbuza elo vumba limnandi lokucheba i-barbershop.
Ekugqibeleni, kuninzi ukuthanda malunga Ukuthambisa iViking ke, ukuba ujonge ukuzama uphawu olutsha, ukomelela okanye ukukhanya, esi sisigqibo esilula.
6128 Izinto ezithethwe ngabantu Izinwele ezenzelwe amadoda | I-Smooth Viking Pomade yaMadoda yokuBamba okuPhakathi kunye nokuKhanya okuPhezulu (ii-2 ii-ounces) -Amanzi asekwe kwiMens yePomade yeeNwele ezithe tye, eziXineneyo
IZINWELE IPOMADE NGOKUGQIBELA NOKUGQIBELA OKUQHELEKILEYO: ...
YENZIWE NGOKUQHELEKILEYO KWEZISEKO: Zenziwe ...
YENZA I-TEXTURE KWI-HAIRSTYLE YAKHO YOKUPHAKATHI: Yenza isitayela sakho ...
$ 11.95 Jonga iAmazon
I-American Crew iPomade
I-American Crew iPomade isungule njengesixhobo esithandwayo sokuyilwa kweenwele emadodeni. Ngapha koko, njengenye yeempawu eziphambili ze-pomade ezijikeleze, uya kuzifumana kwiindawo zokucheba iinwele ezininzi, iisalon kunye neevenkile. Ifomathiweyo ngokubamba okuphakathi kunye nokuqaqamba okuphezulu, abafana bafumana umxube wolawulo, ukuzola, kunye nesheen yokujonga okushushu.
Iinwele ezisekwe emanzini kwaye kulula ukuba nazo, le pomade isebenza kakuhle kwizinwele ezimfutshane, eziphakathi kunye nezide ezifuna ivolumu kunye nentshukumo yendalo. Inokubamba ngokwaneleyo ukonwaba kunye neenwele ezirhabaxa, kodwa azonelanga ukoyisa ngokupheleleyo ii-curls eziqinileyo okanye iinwele ezingqindilili.
Yenziwe nge-lanolin, le wax iya kunyibilikisa iinwele zakho ukuze zingomi. Ezinye izithako zendalo ezinjengeoyile ye-castor, i-glycerin, kunye nokukhutshwa kwegqabi lesilumko kuqhubekeka ukuhambisa amanzi kwizitshixo zakho kunye nokuhambisa okucocekileyo, okuqaqambileyo.
Kwaye ngenxa yokuba le pomade inyibilikiswa ngamanzi, ihlamba ngokulula ngeshawa kunye ne-shampoo. Eyaziwa ngevumba labo elifana necologne, livumba elimnandi oya kulithanda.
Kwimveliso emi uvavanyo lwexesha, fumana I-American Crew iPomade .
Ukuba ufuna ukubamba ukukhanya kunye nokukhanya okuphantsi, unokuzama inkampani Ikhefu yePomade . Ngenye indlela, unokukhetha ukubamba okuphakathi okuphezulu kunye nokuqaqamba okuphakathi kwabathengisi babo Ukwenza iCream .
Izimvo eziyi-2,472 I-American Crew Pomade, i-1.75 oz, uLawulo oluGudileyo kunye nokuKhanya okuphezulu
YINTONI le: Iphaneli yamvanje, eguqukayo yeklasikhi, ...
NGUBANI: Isebenza kakuhle kubo bonke ubude beenwele kunye ...
INZUZO EBALULEKILEYO: Ukubonelela ngokubamba okuphakathi kunye ne-sine ephezulu
$ 11.76 Jonga iAmazon
Ukuba ufuna ukubamba amandla kodwa ufuna ukuphela kokuqaqamba, IPacinos Pomade inokukunceda ukubetha ibhalansi elungileyo. Le pomade ibambeleyo ifumana ukubamba okuphezulu okuguqukayo kunye nokubonakala okuphakathi okucwebezelayo okuzisa inkcazo kunye nokuthungwa kwezona fashoni.
Le fomula ityebileyo, nekhrim yenziwe nge-wax ethambileyo kunye neoyile, ukuthintela iinwele zakho ukuba zome, zibhabhe, ziqhekeze okanye ziqinise. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo ayinamatheli kwaye ayiyi kushiya igrisi okanye intsalela ngasemva. Ngenxa yokuba ngokwendalo ihambisa amanzi kunye neemeko zeenwele, ilungile kwiintlobo zeenwele ezithe nkqo, ezijiyileyo, ezijiyileyo, kunye neenwele.
Uhlobo lokucheba iinwele olusebenza kakuhle luxhomekeke kwiinwele ozama ukuziphumeza, kodwa iyakwazi ukulawula nokubumba iintlobo ezahlukeneyo zobude obuphakathi kunye nezinwele ezimfutshane.
Iqhubeka ngokulula kwaye igudile, kwaye isasazeka kakuhle nangaphandle kweenwele ezirhabaxa, le pomade yokuqingqayo isahlamba ngamanzi.
Ngobunzima obunzima, ivumba elimnandi, siqinisekile ukuba uyayithanda indlela I-Pacinos Pomade yokuCoca iiNwele uziva kwizinwele zakho.
Izimvo eziyi-2,160 I-Pacinos Pomade -Qinisekisa ukubamba
I-Pacinos Pomade -Qinisekisa ukubamba ukuCola kunefemu, kodwa ...
Iinwele zethu ezithambisa amanzi zenza i-dapper ...
Ilungele iintlobo zeenwele ezithe nkqo, ezijijayo okanye ezigobileyo, zethu ...
$ 15.99 Jonga iAmazon
I-Imperial Barber Classic iPomade
I-Imperial Barber Classic iPomade yenye yezona zinto zibambekayo onokuzibamba. Ngelixa iyimveliso enyibilikayo yamanzi ethi ihlambe ngokulula, esi sibambiso siphakamileyo, ukukhanya okuphezulu kwe-pomade kulungele ukwenza isitayile ikama ngaphezulu, icala, ukubuyela umva, ipompadour, okanye nayiphi na inwele efuna ukuhlala amandla.
Nangona kunjalo, le pomade yakudala iyaconjululwa kwaye kulula ukusebenza nayo. Ukwenza buthathaka amandla okubamba, faka nje kwiinwele ezifumileyo kwaye uyakufumana ubungakanani obuphakathi bokukhanya.
Ngaphandle kokubambelela ngokuqinileyo kwizinwele ezomileyo, le pomade yeenwele ezithandwayo zamadoda ayinakoma, iqine, okanye iflake kwizinwele zakho. Kwaye ngenxa yokuba isitayile sakho sinokuphinda sisebenze kwaye siphinde sibuyiselwe imini yonke, imveliso iya kugcina iinwele zakho zixinekile.
Iyahambelana neenwele ezingqindilili, ezijija kunye neenwele, bonke abantu banokusebenzisa le pomade yokucheba. Siyicebisa ngokukodwa ukuba ibengqindilili, ithe nkqo Iinwele zaseAsia ekufuneka ibunjiwe kwaye ibunjwe. Yenziwe ngevumba elimnandi levatala, inuka kamnandi kodwa inyibilike ngokukhawuleza.
Ukubamba okungaphezulu, ukukhanya okuphantsi ukuya kugqitywa kwe-matte, kunye nolawulo oluqinileyo kwizinwele zakho, jonga I-Imperial Barber's Classic Pomade .
Izimvo eziyi-1,386 I-Imperial Barber Classic Pomade, i-6 oz
Amandla okubamba amandla
Isebenza kakuhle nangokulinganayo
$ 22.00 Jonga iAmazon
IViking Revolution iPomade
IViking Revolution iPomade Ngumntu omtsha ofikayo kuloo ndawo. Ngelixa inkampani iye yazimisa njengophawu lokuzilungisa lwamadoda, iimveliso zabo zesitayile kusenokwenzeka ukuba zintsha kuwe.
Olu bamba luqinileyo, ukukhanya okuphezulu kwe-pomade kungqineke kulilungelo ekwenzeni inani leenwele zangoku, ezingaqhelekanga, kunye nezakudala. Ukulungele isitayile sokuphela kwepompadour, utyhoboze umva ngaphantsi, icala elisecaleni, ikama ngaphezulu, kunye ne-mohawk, awuyi kuva nayiphi na intsalela enamafutha okanye incangathi.
Ukugqitywa okucwebezelayo kunokuba luncedo ngakumbi kubafana abaneenwele ezomileyo okanye ezonakalisiweyo kuba kuya kunika iinwele zakho ukubonakala okuqaqambileyo, okunempilo.
Ngethamsanqa, iseyipomade esekwe emanzini ngenxa yoko ihlamba ngaphandle kobunzima. Kwaye ivumba elitsha kukukhanya okungaphaya kokungayi kuqaphela emva kwemizuzu embalwa.
Olunye uncedo lokuncedisa lwale mveliso yesitayile kukuba yenziwe ngeoyile ye-castor, ekhuthaza ukukhula kweenwele kunye neepropathi ezichasayo zebacteria kunye nezichasayo zesikhumba sakho.
Unamandla ngokwaneleyo ukugcina iinwele zakho kwaye zibhalwe usuku lonke, uya kufumana IViking Revolution's Inwele yePomade ukongezwa okwamkelekileyo kwizixhobo zakho zesitayile.
Izimvo eziyi-2,273 I-Pomade yaMadoda i-4oz-UkuQiniseka okuQinisekileyo nokuKhanya okuPhezulu kweSitayile esiDala-Amanzi asekwe kwaye kulula ukuwahlamba ngeViking Revolution (Firm, 1 Pack)
Yenza isitayile seNwele yakho ngokuLula: Viking Revolution Firm ...
Yenza nayiphi na imbonakalo: iinwele pomade zilungile ...
Amanzi anyibilikayo: Senze imveliso yokwenza iinwele ...
$ 9.88 Jonga iAmazon
Iinwele Craft Co Clay Pomade
Iinwele Craft Co Clay Pomade yinyani ayikhanyisi pomade ehambisa ukugqitywa okuhle matte. Ukuba imveliso yokukhanya esezantsi ayikusebenzeli, le pomade ibambe ngokuphakathi iya kukunika ukujonga kwendalo okunqwenelayo.
Ukudityaniswa kwezithako zendalo njengodongwe olujiya iinwele ukuze lubonakale ngokupheleleyo, le pomade iya kongeza ubume, inkcazo, kunye nevolumu eyongezelelweyo kwizinwele zakho.
Ilungele iinwele ezimdaka, iincopho eziqhotyoshelweyo, i-quiff yanamhlanje, abasebenzi abasikiweyo, kunye nezinye iinwele ezimfutshane nezinde ezomeleleyo, ziya kushiya iinwele zakho zikhangeleka zithambile kwaye zigudile.
Ngelixa ubukhulu bokuqina ngokucacileyo bujongana namadoda anoboya okanye ucoceko lweenwele, imveliso isebenza ngokulinganayo kwizinwele ezingqindilili, ezithe tse, ezigobileyo okanye ezijijekileyo ezifuna ukukhokelwa, zingoyiswa.
Ukuziva okulula kuphakanyisiwe kuphela kukugqitywa okungagungqiyo okungayi kushiya intsalela okanye igrisi ngasemva. Amanzi anyibilikayo ngamanzi kwaye angafakwanga kubafana abanolwazelelelo ngevumba, IPomade yeNwele yeCraft kubaluleke kakhulu ukuma kolu luhlu.
1,004 Izinto ezithethwe ngabantu I-Hair Craft Co Clay Pomade 2.8oz-Shine-Free Matte Finish - Ukubamba okuPhakathi / ukujonga kwendalo (Udongwe oluxineneyo) -Imveliso yokuTyetyiswa kwaMadoda, iStistist evunyiweyo-Ilungele iZitayile eziQinisekisiweyo, eziQinisiweyo kunye nezeNamhlanje- ezingafakwanga
I-ZERO SHINE / IMPAHLA YOKWENZA YOKUGQIBELA-Izinwele zethu zoMdongwe ...
UKUBHALA OKUPHAKATHI NOKUJONGA NGOKWENDALO - Izinwele zamadoda ...
I-3OZ JAR & UKUHAMBA NGOKUHLAWULA-Akusekho ukulahleka kwakho ...
I-Rocky Mountain Barber iPomade
Ukunikezela ngokubamba ngokuqinileyo, ukukhanya okukhulu, kunye nevumba lendalo, I-Rocky Mountain Barber iPomade inokukunceda unxibe iintlobo ezininzi zeenwele ezibonakalayo. Ngokugqitywa okumenyezelayo, okungenamafutha, le pomade imangalisayo isebenza kuzo zonke iintlobo zeenwele kwaye ilungele ukwenza isitayile secala lakho, ipompadour, ukubuyela umva, kunye nezinye izitayile zamadoda.
Ipayimade esekwe kumanzi, ihlamba ngokulula ngaphandle kokuhluba iinwele zeoyile yendalo okanye ukuvala iipoyinti. Yenziwe ngezinto zendalo ezinjenge-beeswax kunye ne-glycerin, le mveliso inyibilikisa iinwele kwaye ayizukubangela ukuba isitayile sakho some okanye siqine.
Ivumba elitsha livumba kamnandi xa ubambe inkonkxa yempumlo, kodwa ilula kwaye ayithathi cala kangangokuba ayinakuphikisana necologne yakho okanye ukutshiza komzimba.
Kunikezelwa kwimveliso encinci yebhetshi eCanada, Inkampani yeRocky Mountain Barber Pomade iqinisekisa imveliso entsha, ekumgangatho ophezulu ngalo lonke ixesha. Kwaye iza ngetoni enkulu ye-5 oz ukuze ifikeleleke kakhulu.
2,517 Izinto ezithethwe ngabantu I-Pomade yaMadoda-i-5 oz Tub- Imveliso yokuTya okuDala kunye nokuQiniseka okuQinisekileyo kweNdawo esecaleni, iPompadour kunye nokuKhangela okuKhangelekileyo okuKhanyayo-UkuKhanya okuPhezulu kunye nokuLula ukuhlamba ngaphandle-Amanzi asekwe
Ukusebenza kweBanga lokuCeba
Akukho Gcoba, uhlamba ngaphandle ngokuLula-ngokungafaniyo neoyile esekwe ...
Kakhulu kungcono - ngokungafaniyo ne-4oz pomades, i-5oz yethu ...
IiChronos kunye neCreed Organic Hair Pomade
Chronos kunye neCreed yenza eyona pomade ilungele amadoda. Ngapha koko, kuphela kwento yonke yendalo kolu luhlu, kwaye yenziwe kuphela ngezona zinto zicocekileyo ezikumgangatho ophezulu.
Ngokubamba okuphakathi okuguqukayo, le pomade yeenwele eziqinisekisiweyo-eziphilayo ziya kushiya iinwele zakho ziziva zithambile, zondlekile kwaye zisempilweni. Yenziwe kuphela kwezona zinto zicocekileyo, ezisemgangathweni ophezulu, le mveliso inesitayile iya kuthi ngokuqinisekileyo ikhusele isikhumba sakho sentloko kwaye ikuncede ukhule ujiye, ugcwele iinwele.
Inomboniso omnandi wepine, ibambe imilo ngelixa ivumela iinwele ukuba zihambe ngokukhululekileyo, zenze ukhetho oluthandwayo olufutshane ukuya kwizinwele eziphakathi. Imveliso iqhubeka ngokugudileyo nangokulinganayo, kwaye ibonelela ngokulula.
Izinto eziphambili zendalo kumxube zibandakanya ioyile yekhokhonathi, ibhotolo ye-shea, i-carnauba wax kunye ne-oyile efanelekileyo ye-pine. Ikhokhonathi kunye nebhotolo ye-shea zibonelela ngezibonelelo zokuthambisa ezinokuthintela inkwethu, ngelixa i-carnauba wax ihambisa ukubamba ngokunyusa ivolumu kunye nokuhamba. I-oyile ye-pine ebalulekileyo ibonelela ngevumba elitsha, lobudoda elinokuthi uninzi lwamadoda nabasetyhini luvume livumba elimnandi.
Okokugqibela, le pomade ye-organic ayinamachiza, ayinaburhalarhume, ayina GMO, kwaye ayiqulathanga sulphate, parabens, preservatives, idayi, iifiller, amayeza okubulala izitshabalalisi okanye iziqholo ezenziwayo.
Kubantu abanesikhumba esinovakalelo okanye abo bakhathalele ngokwenene impilo yentloko yabo kunye neenwele, Chronos kunye neCreed Pomade yenye yezona mveliso zintle zokuhombisa iinwele zamadoda ngoku.
910 Izinto ezithethwe ngabantu I-Chronos kunye neCreed-IsiQinisekiso seNwele esiPhathekayo seNwele
UKUQHUBA KWENKQUBO YENKQUBO YEMPILO-I-USDA eqinisekisiweyo, ...
UKUKHULA KWAKHONA KWAKHONA KWEENWELE-Zethu zendalo ...
CLEP & CLEAR SCALP-Iimveliso ezininzi zeenwele zamadoda ...
$ 14.45 Jonga iAmazon
Ioyile vs iPomades esekwe emanzini
Xa ukhetha eyona pomade ilungele amadoda, abafana baya kufuneka bathathe isigqibo phakathi kweoyile kunye nemveliso esekwe emanzini.
IPomades esekwe kwioyile
Iipomade ezisekwe kwioyile ngokwesiko zibonelela ngokubamba okunamandla kunye nokugqitywa kokuqaqamba okuphezulu. Eyaziwa njenge-grease yoqobo kunye nokugqibelela kweenwele ze-retro, i-pomade elungileyo yeenwele ezisemva ngokubanzi iyimveliso yokusekwa kweoyile.
Ngelixa ezi mveliso zihlala zinamachiza amancinci kwifomula yazo (i-petroleum kunye ne-lanolin), badume ngokuba nzima ukuyihlamba kwaye banokubangela amabala entlonzeni ngokwakha.
Eyona oyile isekwe njengepomades efana I-Uppercut Deluxe Monster Bamba kwaye Reuzel Pink iya kugcina iinwele zakho zitshintshile kwaye zenziwe isitayile imini yonke.
Amanzi asekwe ePomades
Ngenye indlela, uneepomade ezisekwe emanzini. Njengomkhwa omtsha wokuzilungisa kwamadoda, ipomade esekwe emanzini kulula ukuba uyihlambe ngaphandle kweenwele kunye nolondolozo olusezantsi lokusebenza.
Iipomades ezinokunyibilika kwamanzi zinokuphantse zinamandla amakhulu, kodwa aziyi kubonelela ngokulinganayo ngokuqaqamba. Njengenguqulelo yanamhlanje, sicebisa ukuba usebenzise ipomade yamanzi ngononophelo lweenwele kunye nempilo.
Ezinye zeepomade zamanzi eziphezulu zibandakanya Suavecito , UBaxter waseCalifornia kwaye Uluhlu .
Eyona Pomade ilunge kakhulu, eQinisekisiweyo, eQinisekileyo, eNwele okanye eNwele?
Xa uthatha isigqibo nge-pomade yohlobo lweenwele zakho, kubalulekile ukuba uqwalasele isitayile osifunayo. Kumadoda aneenwele ezishinyeneyo, indawo ephezulu yokubamba pomade efana Suavecito okanye Uluhlu iya kuba yeyona pomade intle kuwe.
I-Suavecito yipomade esekwe emanzini ebonelela ngeyona nto ibambekayo, ukukhanya okuphakathi kunye nephunga elimnandi. Isiphumo siyimveliso yesitayile enokulawula irhabaxa, iinwele ezingalawulekiyo kunye nokugcina iinwele zakho ezihamba kakuhle endaweni yonke imini.
Enye ipomade elungileyo yeenwele ezingqindilili okanye ezigobileyo ivela UBaxter waseCalifornia . Njenge-pomade yodongwe eyilelwe ukunikezela ngokubamba okuphezulu kunye nokuqaqamba okuphantsi ukuya kugqitywa kwe-matte, ilungile kwizimbo zendalo ezifuna ukuthungwa.
Ukuba ufuna i-pomade yeenwele ezincinci okanye ezintle, emva koko ukukhanya okuphakathi kubambe matte pomade njenge Ubugcisa beenwele okanye Chronos kunye neCreed inokukufumanela okubhaliweyo, ukujonga kwendalo okunqwenelekayo.
wisa bhuma amadoda amnyama
ukucheba iinwele zamadoda aneenwele ezinde
indibano yokuvumisa ngeenkwenkwezi
mfutshane emacaleni ubude phezulu
amakhwenkwe eenwele ezinde
eyona ndlela yokucheba iinwele zobuso obungqukuva
Ukuqhawulwa kweenwele ezingasasebenziyo zaMadoda